Previous Article Dayọsiis Angịlịkan n'Awka Ebuliela Ụfọdụ Ndị Ụkọchukwu n'Ọkwa
Next Article Goomenti Steeti Imo na Nollywood ebinyela aka n’akwukwo
Aka na-achị Imo State, Rochas Okorocha, agwala onye gọvanọ ahọpụtara ọhụrụ, Emeka Ihedioha, na o nweghị ihe ga-eme ka akwụsị ọnọdụ ịgụ akwụkwọ n'efu nke gọọmenti ya bidoro na steeti ahụ. Ọ mere ka amata nkea ụbọchị Wednezdee oge ya na ndị nta akụkọ na-akparịta ụka na obi gọọmenti dị na Owere, isi obodo Steeti Imo.
Ọ gwara ndị niile ọganihu steeti ahụ na-adị mma na ọ ga-ahafe ọchịchị n'ọnwa Mee, afọ puku abụọ na iri na iteghete n'enweghị nsogbu ọ bụla. Onye gọvanọ ahụ kwuru n'ọchịchị ya bidoro mahadum isii ọhụrụ, mahadum nkà na ụzụ anọ, na ụlọ akwụkwọ ndị nkụzi abụọ n'ime afọ asatọ gara aga.
Okorocha, bụ onye guzobere otu kọmitii, nyere ha iwu iji hụ na ụlọ akwụkwọ ndị a bụ nke e guzobere ma bụrụkwa nke ga-aga n'ihu. O kwuru na "akwụkwọ bụ nnukwu ụlọ mmepụta na Steeti Imo".
Ọ sịrị na ọ naghị ekwere gọọmenti ga-anọchi ya ọnyà site na ị guzobe ụlọ akwụkwọ ndị ahụ. "Anaghị m etinye gọọmenti ga-abata na nsogbu, achọghịkwa m ka ha daa site na ị guzobe mahadum, mahadum nkà na ụzụ, na ụlọ akwụkwọ ndị nkụzi ahụ".
Ebe a jụrụ ya ma steeti e nwere ego iji were bido ụlọ akwụkwọ iri na abụọ, Okorocha kwuru, "Mahadum, Mahadum nkà na ụzụ nd ụlọ akwụkwọ ndị nkụzi ndị a bụ nke gọọmenti na ndị mmadụ nọrọ onwe ha o metụrụ n'obi ga-anọkọ ọnụ were dozie. "O nwere ọtụtụ ụzọ esi edozi ma na ahazi ụlọ akwụkwọ ọhụrụ ndị a, mana mkpali butere nke a bụ na ụmụaka anyị, bụ ndị kachasị achọ agụm akwụkwọ mahadum n'ala anyị niile, ga-enwe ohere iji were gụọ akwụkwọ na mahadum."